4-eksisi CNC router Machine 1 ...
3 Axis 4 Axis 6090 CNC umzila ...
Umshini we-DADI CNC router 132 ...
Mini Fibre Laser Ukumaka Ma ...
Isikhungo Sokwenza Imishini Ye-Four-Axis CNC (Rotary Spindle)
Izici: 1. I-Welded ne-thickend square tube, DA 1325ATC R ingu-4 axis ATC CNC Router lapho i-spindle ingafinyelela khona ama-0-180 degrees; I-Japan eyaziwa ngokuthi i-fokotsaer eyaziwa ngokuthi i-spindle ingajikeleza ngokushelela; 2. I-Yaskawa servo motors kanye nabashayeli, i-Taiwan linear umhlahlandlela wesitimela kanye nokuhanjiswa kwama-rack okuqinisekisa umshini ngokushesha okukhulu nokunemba, umthamo omkhulu wokulayisha, ukuthunyelwa okushelelayo nokunembile, umsindo ophansi, nesikhathi esisebenza isikhathi eside; 3. I-Taiwan Syntec control system - Ukusebenza okulula, ukusekela ukusebenza okungaxhunyiwe ku-inthanethi ....
Ukuzisika kwe-CNC kanye ne-Drilling Machine T4
Izici: 1. Ama-spindle amane angaguqulwa ngokuzenzakalela futhi afakwe amathuluzi ahlukile. Izindilinga ezimbili zamandla aphezulu zisebenza ngokuqondile ekubulaleni nasekufeni lapho kuvulwa impahla, kanti ezinye izindlanzana ezimbili zinesibopho sokumba. Lapho umnyango wekhabethe kanye nomnyango oweshelelayo usesimweni, izindondo ezine ngokuzenzekelayo zishintshwa yisilinda kuya Qedela iphethini eqoshiwe ngaphakathi kwamathuluzi ama-4. Ilungele imishini yokukhiqiza yokugaya, yokusika nokubumba, ...
Umshini Wokhuni I-ATC CNC Machine
Izici: 1. Ivikelwe nge-thickend square tube, i-DA 1325ATC ingumshini owodwa we-ATC wezinkuni we-CNC oqukethe umagazini wethuluzi le-carousel. 2. I-Yaskawa servo motors kanye nabashayeli, iTaiwan Linear guide wesitimela 30mm nokuhanjiswa kwama-rack kuqinisekisa umshini ngokushesha okukhulu nokunemba, umthamo omkhulu wokulayisha, ukudluliswa okubushelelezi nokunembile, umsindo ophansi, nesikhathi esisebenza isikhathi eside; 3. I-Taiwan Syntec control system - Ukusebenza okulula, ukusekela ukusebenza okungaxhunyiwe ku-inthanethi. Ukupholisa komoya i-9KW ATC, kahle kahle ...